एक तोरी सन्तानको विश्वास | Apg29
हामी थप विश्वास, बडा र बलियो विश्वास कसरी सह&
त्यहाँ बलियो विश्वास केहि यूटोपियन र वही मुसीबत छ कि मनोवृत्ति भएका परमेश्वरका जनहरूमाझ धेरै पनि छन्। तर सबै छ। हामी शो के विश्वास छ कि धर्मशास्त्रको मा देख्ने।
बाइबल विश्वास र विश्वास लिन आवश्यकता बारेमा धेरै वार्ता। विश्वास बडा र बलियो हुन्छ भनेर धेरै मसीहीहरूले आफ्नो विश्वास बढ्न चाहन्छौं। यो अनुभव गर्न एकदम सम्भव छ।
त्यहाँ बलियो विश्वास केहि यूटोपियन र वही मुसीबत छ कि मनोवृत्ति भएका परमेश्वरका जनहरूमाझ धेरै पनि छन्। तर सबै छ। हामी शो के विश्वास छ कि धर्मशास्त्रको मा देख्ने। हामी KJV, हिब्रू मा पढ्नुहोस्। 11: 1:
"तर विश्वास, देखेको छैन कुराको प्रमाण आशा कुराहरू एक दृढ विश्वास हो।"
विश्वास एक धारणा, एक धारणा वा एक एकदम निश्चित छ भनेर अनुमान लाउनुको छैन। विश्वास हामी हाम्रो मन संग कुरा बुझ्ने कसरी शारीरिक सचेत, के गर्न केही छ।
अक्सर हामी यसो भन्छन्: "म त र यति छ लाग्छ, तर म निश्चित छु।" यहाँ धारणा, सायद conjecture वा अनुमान आउँछ। विश्वास केहि पूर्ण बिभिन्न, ठोस कुरा, बिल्कुल सुरक्षित छ। विश्वास परमेश्वरको प्रतिज्ञा मा विश्वस्त र देखिने छ के को सत्य को दृढ विश्वास छ। पद3यसो भन्छिन्:
"विश्वास गरेर भिजुअल हामी देख्न सक्छौं के बनाउनुभयो छैन भनेर, कि ब्रह्माण्डको परमेश्वरको वचन द्वारा सिर्जना गरिएको थियो हामी बुझ्छु।"
प्राप्त विश्वास द्वारा अन्तरदृष्टि र समझ। एउटै विश्वास द्वारा बुझ्नुहुन्छ। विश्वास आँखा देख्न र देखिने पछि वास्तविकता मा पुग्यो कि दुनिया परे जान्छ। हामी पढ्न: "विश्वास गरेर हामी बुझ्छु।" यो सत्य हो। "मन को माध्यम ले, हामी विश्वास गर्छन्।" तर अपश्चात्तापी मान्छे यो सबै गर्न खोल्दै हुनुहुन्छ, र भन्छ यो शारीरिक सचेत र साधारण "साधारण अर्थमा" को एक उत्पादन हो।
हामी थप विश्वास, बडा र बलियो विश्वास कसरी सहभागी सक्नुहुन्छ? बाइबल यसो भन्छ:
"विश्वास परमेश्वरको वचन द्वारा सुनेपछि द्वारा आउँछ।"
यो परमेश्वरको वचन मा गहिरो अन्तरदृष्टि छ जो एक प्रचारक द्वारा पहना थियो जब हामी बाइबलको शिक्षा कुरा सुन्दा विश्वास आउँछ। विश्वास पनि पवित्र आत्मा डोऱ्याइ मा बाइबल बारम्बार पढेर आउँछ। पवित्र आत्मा गरेको anointing टाढा सबै भन्दा राम्रो बाइबल शिक्षक हो। वचन पढ्ने मा, यसको लागि परमेश्वरले यसो भन्नुभयो छ, तिनीहरूले त्यो हो, प्रतिज्ञा मा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न महत्त्वपूर्ण छ, र उहाँले धारण प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तिनीहरूले हामीलाई बोक्न तपाईं साँच्चै बाइबल प्रतिज्ञा अपनाउँछन् छ।
अब्राहाम बलियो विश्वास थियो मानिसलाई थियो। परमेश्वरले उहाँलाई एक जैविक impossibility थियो जो एक छोरा, को प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो। तर असम्भव देख्न सक्थे र यो सम्पूर्ण सम्भव थियो कि अझै पनि विश्वास गर्छन्। हामी nuBibeln, रोम देखि शब्दशः पढ्नुहोस्। 4: 18-22:
18 "भए तापनि कुनै आशा थियो, अब्राहाम जसरी र विचार आशा, र यति उहाँले यो भन्नुभयो थियो, धेरै जातिका पिता छ पिता भए 'त्यसैले धेरै आफ्नो सन्तान हुनेछ।'
19 त्यसैले अब्राहाम तिनीहरूको विश्वास मा, त्यो सय बारेमा वर्षको तापनि कंपित र आफ्नो शरीर कुनै बल थियो लाग्यो, र हुनत आफ्नो पत्नी सारा बच्चाहरु छन् सकेको कहिल्यै थियो, र अब यसलाई अझै पनि पुरानो थियो।
20 तिनले आफ्नो विश्वास उहाँलाई बल दिनुभयो लागि, परमेश्वरको प्रतिज्ञा मा unbelief मा doubted कहिल्यै, र परमेश्वरको सम्मान।
21 उहाँले पूर्णतया परमेश्वरको उहाँले प्रतिज्ञा केहि गर्न सक्छन् भन्ने विश्वस्त थियो,
22 र धार्मिकता तिनलाई जम्मा भएको थियो। "
हामी एउटा उदाहरण रूपमा अब्राहाम लिन भने, हामी विश्वास बढ्दै लागि अनमोल मौका हेर्नुहोस्। मा 1917 अनुवाद यस्तो लेखिएको छ:
"... उहाँले बरु आफ्नो विश्वासमा बलियो थियो; परमेश्वरको महिमा दिने ... "
सम्मान गर्न परमेश्वर बलियो विश्वास प्राप्त गर्न एक तरिका हो। तर त्यसपछि सही तरिकामा प्रभुको महिमा। यसलाई यशैया भन्छन् रूपमा तपाईं के गर्न सक्दैन। 29:13 (nuBibeln):
"यी मानिसहरूले शब्दहरू आफ्नो मलाई नजिक र आफ्नो मुखले मलाई आदर, तर आफ्नो हृदय मबाट टाढा छ, र परमेश्वरको आफ्नो डर मात्र मानिसहरूको सिकेका छ।"
हृदय विचार, शब्द र कामहरू संग, आफ्नो जीवन परमेश्वरको आदर समावेश छ यसलाई आउँछ। यो अब्राहाम गरे।
एक चोटि चेलाहरू येशूले तिनीहरूको विश्वास प्रोपेगेट गर्न आग्रह गरे। "हाम्रो विश्वास वृद्धि," तिनीहरूले भने। येशूले जवाफ दिनुभयो, मत्ती। 17:20:
"... Verily म तिमीहरूलाई तिमीहरू एक तोरी बीउ रूपमा विश्वास छ भने, तपाईं यो पर्वतमा, भन्न सक्छौं सार्नुहोस् यहाँ त्यहाँ गर्न, र यो उत्प्रेरित गर्नेछ भन्न;। र तिम्रो लागि असम्भव हुनेछ"
केही परमेश्वरको वचन प्रतिज्ञा छ, वा परमेश्वरको छोराछोरीको फाइदाको लागि तोरी बीउ रूपमा विश्वास गर्नेहरूका लागि असम्भव छ। साँचो विश्वास परमेश्वरको प्रकट वचन र उहाँको इच्छा आफ्नो सम्पूर्ण भरोसा।
येशूले यूहन्ना एक अद्भुत प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। 14:12
"साँच्चै, साँच्चै, म तिमीहरूलाई, मलाई विश्वास गर्ने उहाँले पनि म के भन्ने काम गर्नेछ भन्न;। म मेरो पिता जानको उहाँले गर्नेछ यी भन्दा र ठूलो काम"
येशूको साँचो विश्वास गर्ने सबै काम गर्न को लागि तिनीहरूले सम्भव छ कि यो मतलब उहाँले, र बडा उहाँले गर्नुभयो भन्दा। यो एक स्वप्नलोक, वही मुसीबत कुरा हो? सबै छैन! आत्मा-भरिएको प्रचारकहरूको पढ्न र अध्ययन परमेश्वरको वचन यस्तो विश्वास लाभ उठाउन सक्छौं लगनशील भई शिक्षा र सुनेर।